Guyyaa Idiladdunyaa Fistulaa Dhaabuu: 'Fistulaan abaarsa miti' - BBC News Afaan Oromoo
Guyyaa Idiladdunyaa Fistulaa Dhaabuu: 'Fistulaan abaarsa miti'
Madda suuraa, Joe Raedle
Kaleessa Roobii guyyaan dhibee Fistulaa ''Obstetric Fistula'' dhaabuutu sadarkaa idil addunyaatti kabajame oole. Akka gabaasni Dhaabbata Fayyaa Addunyaa jedhutti biyyoota Sahaaraa gadii, Ezhiyaa, biyyoota Arabaa, Laatiin Ameerikaafi Kaaribiyaan keessatti walumatti dubartoonni miiliyoona 2tti siiqan dhibee kanaan dararamaa jiru.
Rakkoon fayyaa kun dahumsa wajjin walqabatee kan dhufu ta'uu isaatiin dhibee dhaabuun danda'amuudha.
Akka ragaan garaa graa mullisanitti Feestullaan dhaabbata fayyaatti da'uu dhiisuun ciniinsuun yeroo dheeraaf namarra turuutiin mudata.
Osoo umuriin hin ga'iin eerumuunis akka rakkoo kanaaf sababa ta'u qorannoon dhibee kanarratti taasifaman ni mullisu.
Rakkoon fayyaa kun erga uumamees wallaansa barbaachisu argachuu dhabuun rakkoo fayyaa ta'uurra darbee kan hawwaasummaafi dinagdeellee ta'uun mullata.
Kun ammoo dhibeen Feestullaa rakkoo bobbaa gosa lamaanuu ykn lamaan keessaa tokko qabachuu waliin waan walqabatuuf maatii ofiirraallee dabalatee hanga adda nama baasuutti ykn qoollifamuutiif geessisa.
Hospitaala Fistulaa Hamiliinitti Ogeessa Gadameessaafi Ulfaa Wallaansa Fistulaa Dr. Yashiinehu Dammiraw kan ta'an dhibee kana ilaalchisee BBC waliin turtii taasisaniiru.
Dr. Yashiinehu Hospitaalichi erga hundaa'ee waggaa 6o ta'uu ibsanii dame isaa kutaa biyyaa bakka gara garaatti banuun dhibee kanaaf kaffaltii tokko malee wallaansa kennaa akka jiru dubbatu.
Wallaansa fayyaa kennuu qofa osoo hin taane, rakkoo qoollifanaa waliin walqabatee irra ga'u akka mo'ataniif leenjii hojii uumuufi of danda'uu akka kennanis ibsaniiru.
Ogeessi kun ka'umsi rakkoo kanaa da'umsarratti akka ta'e ibsuun, dhibee fayyaarra darbee rakkoo hawwaasummaafi dinagdee haadhotii ta'uu dubbatu.
Dr. Yashiinehu qorannoo gaggeeffame jiraachuu baatus, dhibeen Feestullaa hawwaasa keessatti hubannoo argateera. Kanaan dura akka dhibee irraa hin fayyineefi dheekkamsa Waaqayyooti jedhamaa akka ture himanii, amma garuu sababii dhibee kanaa hubatanii irraa fayyuun akka danda'amullee hubatameera. "Gaaffiin jiru eessattin wallaansa argadhaafi attamittan deemee wallaanamaadha. Kanaaf ammoo dhaabbileen akka kanaa akka jiran odeeffannoo kennuudha," jedhan.
Tajaajilli da'umsaa baadiyyaatti baballataa jiru rakkoo kana xiqqeessaa jiraachuu eeranii haadholiin hordoffii barbaachisu akka taasisaniifi dhaabbileen fayyatti akka da'an jajjabeessuun barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru.
Aadde Birillee Mohaammed naannoo Jimmaarraa wallaansa dhibee Feestullaatiif bara A.L.I 1987 gara Hospitaala Hamiliin dhufte.
Umurii waggaa 14 osoo jirtuu bosona keessatti dirqamaan gudeedamtee akka dhibee Feestullaaf saaxilamte yaadatti.
Haalli ture ibsuuf raakisaadha kan jettu Birilleen, gudeedamurraan kan ka'e ulfaa'uu dubbatti. "Kan na gudeede jaarsa guddaa tokko ture. Ciniinsuun na qabee da'uus hin dandeenyee guyyaa dheeraa narra ture. Dhumarratti torbanii booda mucaayyu qaama kukkutaanii baasan. Kun waggaa 20 dura, garuu yeroon yaadadhu dhibeen Feestullaa ammam akka suukaneessaa ta'en yaadadha," jette.
Yeroo sanatti karaa faranjoota mishinii naannoo itti dhalatte jiraniin gara Finfinnee akka dhufte himtee, namoonni yeroo sana waan ishee mudate sana abaarsa sababii cubbuu maatiin isheen hojjetan akka ta'e yaadatti.
Rakkoon qoollifannaa irra ture hamaa akka tures ni yadatti Birilleen. Qofaa godoo keessa jiraataa akka turteefi namoonni waa'ee ishee yaada gara graa dubbachaa turuu dubbatti. "Intala abaarsaa waan taateef kun mudate kan jedhan jiru. Kaan ammoo yeroofidha malee takka turee si dhiisa naan jedhu," jetti.
Erga gara Hospitaalaa geessee kan duraan abaarsaan akka irra ga'e yaadaa turte warren rakkoo kan ishee waliin walfakkaatu qaban argitee jajjabaachuus ni dubbatti.
Birilleen dhibeen Fistulaa abaarsa akka hin taane barte.
Dirqamaan gudeedamuun walqabatee miilli ishee sadarkaa irraa muramuutti dhiyaatee ture jetti. Dhumarratti garuu wallaansa yeroo dheeraatiin rakkoo Feestullaafi miilla isheerra ga'ee fayyitee Birilleen ar'a leenjii ogummaa fudhattee namoota dhibee kan ishee waliin walfakkaatuuf wallaansa fayyaa gochaa jirti.
"Ani fayyee umuriin naaf dabalamee akkan namoota tajaajilu carraa argachuukoo baayyee na ajaa'iba. Kanaaf, namoota yeroon tajaajilu gammachuudhan. Warri waggaa dheeraa na duukaa dhama'aa turan namarraa osoo hin taane Waaqarraa qofaa argatu," jechuun miiraan ibsiti Birilleen.
Dubartii HIV qabdu kaaniifillee ‘du’a bareeda’ akka du’an gargaartu
Daqiiqaa 59 dura
'Maatiinkoo umrii waggaa 14'tti akkan heerumuuf na dirqamsiisan'
Ikkuwaatooriyaal Giiniitti dhohiinsa uumameen 15 du'anii, 500 miidhaman